ओहोदा बिर्सिएका शिक्षामन्त्री : नेपालमाला
ओहोदा बिर्सिएका शिक्षामन्त्री
Mar 3, 2021 --
काठमाडौं : नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिजको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा दिएको मन्तव्य अहिले खुबै चर्चामा छ । दीक्षान्त समारोहका मुख्य वक्ता रहेका शिक्षामन्त्रीले देशको शैक्षिक अवस्था, विद्यार्थीहरूको भविष्य, पठन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने, ज्ञान, सीप, क्षमता राष्ट्र विकासका लागि खर्चने आदि योजना पस्नुपर्ने हो । त्योसँग सम्बधित धारणा सुनाउनुपर्ने थियो । मूलतः सरकारको नीति बताउनुपर्ने थियो ।
तर, उनले आफ्नो ओहोदा बिर्सिए । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कोही माइकालाल जन्मिएको छ ? भन्दै अप्रासंगिक भाषण गरे ।
“यो दुनियाँमा कोही माइकालाल जन्म्या छ रु केपी ओलीलाई कठालोमा समातेर ल्याउने रु यो दुनियाँमा कोही माइकालाल जन्म्या छैन । केपी ओली इज द केपी ओली । फुटबलको पेलेजस्तै हो । कसैलाई रहर लागेर १३ दिनभित्र राजीनामा दिएन भने सडकमा ल्याएर पछार्छु रे।।।१ के भन्या यो रु तागत छ रु जसरी बुझ्न मन लाग्छ बुझ्नुस् । यथार्थ सत्य यही हो । के राजीनामा दे भन्दैमा खुरुक्क राजीनामा दिन्छ रु राजीनामा दे भन्नेहरूले बनाएको प्राइमिनिस्टर हो रु अदालतको फैसलाले आएको सरकार हो यो ? यो त जनताका जनताको जनमतको बलमा आएको सरकार हो । ढुक्क हुनुस्, ढुक्क हुनुस् । हिजोभन्दा बलियो, पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर यहाँ हाजिर छ । हिजोभन्दा पावरफुल भा’छु । कसैलाई रहर लागेर खुरुक्क राजीनामा देला भन्ठानेको होला । अहिलेको राजनीतिक निकासको अन्तिम उपाय भनेको जनादेश, तीन करोड जनतासँग सोध्ने भन्या हो । अदालतले फैसला गरेर सोध्न दिन्नँ भनेर तीनजना न्यायाधीसले फैसला गर्दिइहाल्नुभयो । फैसला गरेको मान्दिन्छौँ हामी । यसले समाधान दिँदैन, प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू,” उनले मन्तव्यका क्रममा भनेका थिए ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।अहिले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिएर उनले आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न नसकेको र के बोल्नुपर्ने हो ख्याल समेत पुर्‍याउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । आलोचना भइरहेको छ ।
तर, जति आलोचना गरे पनि मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीको बोली, शैली अनुकरण स्पर्धामा कुनै कमी आएको देखिँदैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन देउवाको प्रस्ताव, जसपा अलमलमै